Qaybta-2.. Macmiil Dulmane Xaqaagii xagee jiraa? – Bosaso Times News
admin August 11, 2017 Qaybta-2.. Macmiil Dulmane Xaqaagii xagee jiraa?2017-08-11T18:06:47+00:00 Articles, somali News No Comment
Q2: Farsamada Gacanta
Farsamo xumida ka jirta dalka Soomaaliya waad la fajacaysa iyo sida aan cidna ugu aabo yeelin gudashada waajibaadka qofka farsamo yaqaanka ah ku waajibtay maadaama uu qaadanayo lacag lagu soo dhididay. Waxaa waajib ah in qofka sheegta inuu farsamo yaqaan yahay uu muujiyo xilkasnimo iyo aqoon shaqo kana dhabeeyo sheegashadiisa fasamoyaqaanimo.
“Mar aan sidaa u fogeyn ayaan guri aan deganahay ka bedelay albaabkii caadiga ahaa oo gelinay ganjeelo weyn. Ganjeelkii markii la rakibayba waxaa dhib noqday xiritaankiisa iyadoo ay kaliftay in ganjeelka aan si dheeli tiran loo yagleelin/rakibin, dib ayey ugu noqdeen oo wax toosiyeen qoladii howsha waday balse ugu danbeyntii waxay noqotay albaabka qof weyn maahee inaan ilmaha toban jir ka yari furi karin ama xirikarin.
Waxaa intaa kasii darnayd in albaabkii ganjeelka markii ay asbuuc kasoo wareegtay in xatabadii albaabka xiraysay kharibantay taas oo noqotay dhib horleh iyo shaqo dheeraad ah oo dadkii kusoo korortay. Waxaan isku daynay inaan la xiriirno qoladii albaabka rakibay iyo kuwii laga soo gaday, midna jawaab wanaagsan lagama helin meel kale oo loo dacwoodana ma jirin, marka waxay noqotay in albaabku uu noqdo shaqo soo korortay ee uusan noqon howl yaraatay sidii markii hore la filayey. Ugu danbeyn waxay nagu kaliftay inaan farsamo yaqaan kale raadsano oo lacag dheeraad ah bixino.”
Arinka tusaalaha albaabka samayntiisa waa mid dalka oo dhan ka jirta, farsamada guud ahaana waa hoosaysaa iyo khibradda loo leeyahay. Hadii aad guri hagaajinayso sida albaab, daaqad, derbi dib loo dhisayo iyo wax intaa ka siiweyn waxaad la kulmaysaa dhibaatooyin badan iyada oo lacagta farsama yaqaanadu ku weydiinayaan ay badan tahay sidii wax laguugu sheegayna aan laguugu samaynayn inta badan.
Dhinacyada kale ee farsamada sida koronto gelinta, baabuur samaynta, farsamada qalabka guryaha lagu isticmaalo iwm waxaad kala kulmaysaa dhibaatooyin badan oo kale oo kuwa kore ka sii daran.
Inta badan arimaha xaga farsamo xumida ee lagula kaco macmiilka waxaa sabab looga dhigi karaa aqoon daro iyo xirfad kororsi la’aan waayo tan iyo burburkii wax iskuul farsamo oo tayo leh dalka Soomaaliya kama hirgelin lagamana furin si khaas ah iyo si guud midna.
Dadka ka shaqeysta farsamada gacanta dalka Soomaaliya waxay inta badan u badan yihiin dad shaqada bowsaday oo aan iskuul iyo goob waxbarasho soo marin sidaa awgeedna aan lahayn aqoon uu ku garto waajibaadka saaran. Waxaa intaa sii dheer, beenta ay sheegaan marka ay rabaan inay howl kuu qabtaan iyo sida ay ugu dadaalaan inaad shaqada siiso, hadhowna dhabarka kuu jeediyaan markaad tilmaanto inaan shaqada sidii la filayey aan laguugu qaban.
Farsama xumada ka jirta Soomaaliya meel kasta way gaartay, hadey dhisme tahay, dayactirka qalabka kala duwan, iyo hadey baabuur la samayno tahayba.
Waxaa kaloo jira in qalabka ay adeegsadaan dadka farsamada ka shaqeysta ay yihiin kuwa duugoobay oo waa hore laga tegay, mana jirto garasho guud oo tilmaamaysa in qalabka farsamada layska bedelo. Waxaad arkaysaa baabuur asaga oo dhan la furfurayo oo dhulka matoorka oo dhan la soo dhigayo, sababtoo ah baabuurka waa kuwii danbe, ninkaan makaaniga ahna wuxuu yaqaaney baabuurtii hore, marka si uu cilada u helo waa inuu baabuurka oo dhan furfuraa, taasna inta badan waxay keentaa in matoorkii iyo baabuurkii cilad dheeri ah ku kororta iskadaa in cilad laga saaro.
“Imisa ayey dhacdaa in la arko farsama yaqaan aan qalabkii farsamada wadan oo qofka shaqada loo qabanayo ku leh, qalab ma wato ee adigu keen!”..
Ma jiraan goob aad u cabato oo qofkaan sheegtay farsamo yaqaanimada haduu kugu xad gudbo kaa qabata ama kaala hadasha, marka inta badan waxay noqotaa in aad iska carooto oo aad iska tagto, uur ku taagladaadana aad ay adiga kugu koobnaato ilay wada kale kuuma furnee.
Ma arkaysid shirkaddo xafiisyo leh oo dhinaca farsamada gacanta noockastaba ha ahaatee si habeysan uga ganacsada oo leh shaqaale tababaran iyo meel loo cawdo hadii sidii la rabay aan wax laguugu qaban.
Lama soo koobi karo dhibaatooyinka ka jira bulshadana ka haysta xaga farsamada gacanta iyo guud ahaan adeega dayactirka kala duwan ama farsamo dhinackasta oo aad eegto.
Akhriso qaybtii 1aad:
Lasoco qaybga 3aad.
Siyad Ali Yusuf
http://www.bosasotimes.com/qaybta-2-macmiil-dulmane-xaqaagii-xagee-jiraa/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/08/consumerrights-1024x768.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/08/consumerrights-150x150.jpg 2017-08-11T18:06:47+00:00 adminArticlessomali Newsadeeg xumo,dulmi,Macmiil,SoomaaliyaQ2: Farsamada Gacanta Farsamo xumida ka jirta dalka Soomaaliya waad la fajacaysa iyo sida aan cidna ugu aabo yeelin gudashada waajibaadka qofka farsamo yaqaanka ah ku waajibtay maadaama uu qaadanayo lacag lagu soo dhididay. Waxaa waajib ah in qofka sheegta inuu farsamo yaqaan yahay uu muujiyo xilkasnimo iyo aqoon shaqo...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
adeeg xumo, dulmi, Macmiil, Soomaaliya
« Isbarbardhiga Degmooyinka Qandala iyo Bender Bayla xaga Horumarka
Dawladda Hoose Garoowe oo lagu eedeyey wax qabad la’aan. »